The Ab Presents Nepal » बेवास्ता नगरौँ : मलामी गएर फर्केपछी वा शवसँगै यात्रागरेपछि यसकारण नुवाउनु अनिवार्य छ हेर्नुहोस
बेवास्ता नगरौँ : मलामी गएर फर्केपछी वा शवसँगै यात्रागरेपछि यसकारण नुवाउनु अनिवार्य छ हेर्नुहोस
तपाईहरुले याद गर्नुभएको होला । मलामी गएपछि अनिवार्य नवाएर मात्र अरु कार्य गर्ने चलन गाँउ घरमा कायमै छ ! शास्त्रमापनि मलामी गएपछि वा शवसँगै यात्रागरेपछि स्नान गरेर मात्र गृह प्रवेश गर्नु भनिएको छ !चाणक्यलेपनि भनेका छन् की केही यस्ता अवस्थाहरु छन्त्य सपछि नुहाउनु जरुरी हुन्छ ! उनका अनुसार स्त्री होस् या पुरुष स्वास्थ्यका लागि त नुहाउनै पर्छ । चाणक्य नीतिका अनुसार यी चार काम सकेपछि नुहाउनुपर्छ ।
तेल मालिश गरेपछि नुहाउनुपर्छ चाणक्यले बताएअनुसार स्वस्थशरीर र चमकदार छालाका लागि हप्तामा कम्तीमा एकपटक पुरा शरीरमा तेल मालिश जरुरी छ ! तेल मालिशपछि शरीरमाभएका रोम छिद्रहरु खुल्छन् र भित्रका विकार पदार्थहरु बाहिर निस्कन्छन् ! यसकारण तेल मालिश गरेको केहीसमयपछि नै नुहाउनुपर्छ ! तेल मालिशपश्चात ननुहाई बाहिर जानु अशुभ मानिन्छ ।
यौनसम्पर्क गरेपछि नुहाउनुपर्छ स्त्री होस् या पुरुष यौनसम्पर्क गरेपछि नुहाउनु जरुरी मानिन्छ । किनकी उक्त समयमा महिला तथा पुरुष दुवै अपवित्र हुन्छन् ।
चाणक्य नीतिका अनुसार यदिकोहि यौनसम्पर्कपछि पनि नुहाउँदैन भने ऊ कुनैपनि धार्मिक कामका लागि योग्य हुन सक्दैन ।कपाल काटेपछि नुहाउनुपर्छ चाणक्य नीतिका अनुसार कपाल काटेपछि नुहाउनुपर्छ । कपाल काटेपछि पुरै शरीरभरि कपालका स-साना टुक्राहरु झरेका हुन्छन् । त्यसकारण कपाल काटेपछि नुहाउनु जरुरी मानिन्छ । शास्त्रमा विश्वास छ । यो कुरा सही लागेको महसुस भए सेयर गर्न सक्नुहुनेछ ।